“Dayaxa qofka jooga xitaa wuu arki karay in qalad la igu galay.”. Gary Cahill oo weeraray garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulankii xalay ee Chelsea iyo Swansea City – Gool FM
“Dayaxa qofka jooga xitaa wuu arki karay in qalad la igu galay.”. Gary Cahill oo weeraray garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulankii xalay ee Chelsea iyo Swansea City
(London) 12 Sebt 2016. Daafaca Chelsea Gary Cahill ayaa sheeganaya inuu iska cadaa qaladkii lagu galay isla markaana laga arki karay xitaa dayaxa.
Laakiin garsooraha dhex-dhexaadinayay kulankii xalay ay Blues 2-2 la dhaafi waysay Swansea City ee Andre Marrine ayaa arki waayay waliba isagoo aad ugu dhow, wuxuuna u ogolaaday Leroy Fer inuu sii ordo isla markaana uu dhaliyo kubbadii uu ka soo xoogay Cahill.
“Waa qalad cad, waan careysanahay, dhab ahaan, dayaxa hadaad fadhiso xitaa si cad ayaad u arki kartay, waan ka leexsaday kubbada dhanka dambe ayuu iiga yimid, wuxuu ahaa qalad u cad sida maalinkii, inaan dib u arkana way iga sii careysiineysaa,” Cahill ayaa sidaa yiri.
“Madadaalo iyo ciyaaro ayay u tahay taageerayaasha, laakiin ciyaartoyda waaye kuwa dhibtoonaya, way i dileysaa midaa waxayna dileysaa kooxdeyda. Waxaan luminay labo dhibcood oo muhiim u ah horyaalkan.
“Fiiri wajigeyga! Waa waxaan caqli gal ahayn, waxaan ku iri garsooraha waxaa jira saddex kale oo garsoorayaal ah oo arki kartay midaa, waxaa jiray labo qalad, garsoorayaashuna waxay sheegeen inaysan arki karin, aniga ahaan suuro gal ma ahan.”.
“Go'aankii ugu xumaa nolosheyda waa inaan ku biiray Liverpool.”. Mario Balotelli oo furka tuurtay
Ilkay Gundogan oo lagu wado inuu habeen dambe u safto Man City kulankiisii ugu horreeyay